Darpan Nepal – एक दिनमा कति पटक सम्म यौनसम्पर्क राख्नु ठीक हुन्छ ? जानी राख्नुहोस ।
एक दिनमा कति पटक सम्म यौनसम्पर्क राख्नु ठीक हुन्छ ? जानी राख्नुहोस ।
यौन क्रियाकलापमा भन्दा टेस्टेस्टेरोनले यौनेच्छा वा यौन व्यग्रतालाई बढी प्रभाव पर्छ । महिलामा पनि टेस्टेस्टेरोनले नै यौनेच्छा वा यौन व्यग्रताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसमा स्वाभाविक रूपमै इन्द्रियहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हाम्रा इन्द्रियहरू दृष्टि, स्पर्श, ध्वनि, गन्ध र स्वादसँग यौन सम्पर्क वा यौनेच्छासँग सम्बन्धित छन् भन्ने हामीलाई थाहै छ ।
यौनसम्पर्कलाई ‘शारीरिक सम्बन्ध’ भनिए पनि यसको मानसिक पाटो एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । यौन उत्तेजनाको स्रोत जे–सुकै भए पनि अन्तिम रूपमा त्यसलाई अर्थ लगाउने र बुझ्ने कुरा मस्तिष्कले नै गरिरहेको हुन्छ
कति यौनसम्पर्क राख्नु ठीक ? – यौन स्वास्थ्यका सन्दर्भमा यो एक चिकित्सकलाई प्राय: सोधिने प्रश्न हो । यो व्यक्ति र स्थितिअनुसार फरक हुन्छ । हामीलाई प्यास लागेअनुसार पानी पिउँछौं । धेरै लागे धेरै पटक र त्यति प्यास नलागे थोरै । यौनेच्छा शान्त पार्न आफ्नो आवश्यकताअनुसार धेरै वा थोरै यौनसम्पर्क राख्न सकिन्छ ।
यौनेच्छा बढेपछि यौन क्रियाकलापमा संलग्न नभैनहुने बाध्यात्मक स्थिति अनुभव गर्नु असामान्य रूपमा यौन चाहना बढी अर्थात अति कामुकता हुने स्थितिको एउटा महत्वपूर्ण लक्षण हो । यस्तो स्थितिमा व्यक्ति आफैंले गरेको आत्मनियन्त्रणको प्रयास सफल हुँदैन् ।
आफूले चाहेर पनि आफ्नो यौन व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने भए वा त्यस्तो व्यवहारले परिवार वा साथीहरूसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थाले वा कार्यालय वा व्यवसायको काम वा दैनिकी नै प्रभावित भए वा जहिले पनि विशेष गरेर आफूले नचाहेको बेला पनि यौनसम्बन्धी कुरा मात्र दिमागमा निरन्तर रूपमा आइरहे विशेषज्ञको सहयोगको नलिइनहुने भएछ भन्ने बुझ्नुपर्छ । आशा गर्छु, तपाईंलाई त्यस्तो केही भएको छैन । के गर्ने ?
तपाईंले अहिले जति पटक यौनसम्पर्क गरिरहनुभएको छ त्यतिले तपाईंको यौनेच्छा पूरा गर्न पर्याप्त छैन भने त्यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ भने यदि मन लागेको छैन भने घटाउन सक्नुहुन्छ । दुई व्यक्ति अर्थात् श्रीमान्–श्रीमती दुवै संलग्न हुनुपर्ने भएकाले यसमा दुवैको सहमति र समझदारी पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।माथी भनिएजस्तै अति कामुकताको शंका छ भनेचाहिँ चिकित्सकबाट सल्लाह लिनुपर्छ ।
Previous Postकेटीहरु चप्पल हातमा लिएर रुँदै भागिरहेका थिए……………. Next Postहाँसो रोक्न नसकिने अचम्म लाग्दा तस्विरहरु !